Eric Huismann က Apple Watch2သည်မည်သည့်အရာများဖြစ်နိုင်သည်ကိုမြင်ယောင်နေသည် ငါက Mac ကပါ
Apple Watch2ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေကိုသဘောကောင်းတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်
Miguel အိန်ဂျယ် Juncos | | Apple, Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, NOTICIAS
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်အတိုင်း, Apple ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုတင်ဆက်မှုတစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူမကြာမီလာမည့်မျိုးဆက်သစ်တွင်မည်သို့သက်တမ်းတိုးမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာသည်။ အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုအမျိုးအစားများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ဤကိရိယာ၏အခြားအယူအဆကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတွေ့မြင်နိုင်သည် ၎င်း၏ပစ်လွှတ်တရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
မည်သည့်နောက်ထပ်, ယခုပုံရိပ်တွေသွားစရာမလိုဘဲ အဘယ်အရာကို Apple Watch2ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကစိတ်ကူး ဂျာမန်ဒီဇိုင်နာအဲရစ် HuismannJonathan Ive နှင့်သူ၏အဖွဲ့၏စိတ်ထဲမှမွေးဖွားလာသည့်ဒီဇိုင်းကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အရသာကောင်းရှိကြောင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ပုံရိပ်ကိုအတော်အတန်တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း၎င်း၏အနှစ်သာရအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းသည်။
ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းသူလုပ်ခဲ့တာကနာရီရဲ့အထူကိုလျှော့ချဖို့ဖြစ်တယ် မျက်နှာပြင်အနားလျှော့ချပါ မျက်နှာပြင်ကြီးကြီးထားရန် (နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသောအရာ)၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်ကောက်ခြင်းအပြင် FaceTime ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်နှင့်တည်ရှိမည့် selfies ပြုလုပ်ရန် ၁.၂ Mpx ကင်မရာဒီဇိုင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်မှာ။ ဤအရာအလုံးစုံဗားရှင်းအားလုံးအတွက်အသစ်သောအရောင်များနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်တွဲဖက်။ သွားလိမ့်မယ်။
သူသည်ဒီဇိုင်းတွင်တွက်ချက်မည့်အာရုံခံကိရိယာများကိုထည့်သွင်းရန်ပင်ဝံ့သည် သွေးပေါင်ချိန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် အားကစားကြိုး၏ထိပ်တွင်တည်ရှိပြီး Apple Watch ၏ပထမမျိုးဆက် (သွေးပေါင်ချိန်) ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သော်လည်းအဆုံးတွင်မပါ ၀ င်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူလူသိများသောအရွယ်အစားနှစ်ခု မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့်မူကွဲသုံးမျိုးကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်။ 38mm နှင့် 42mm နှစ်ခုလုံး ပိုကြီးတဲ့လက်ကောက်ဝတ်များအတွက် 45mm ဖြစ်လိမ့်မယ်သောဗားရှင်းပေါင်းအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီ။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနာရီအသစ်မှာဒီအသစ်အဆန်းတွေအားလုံးကိုပေါင်းစပ်သွားမှာပါ၊ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးနဲ့အတူတူပါပဲ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်သော်လည်းတိုးတက်လာသောဒီဇိုင်းကကျွန်ုပ်ထင်သည်ဆိုပါစို့။ လက်တွေ့ကျကျရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒီမျိုးဆက်သစ်မှာငါတို့တွေ့နိုင်တာကို အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Apple Watch.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » Apple Watch2ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေကိုသဘောကောင်းတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်
Adriana Si Vasi Sibisan ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံတွင်ရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ပထမဆုံး Apple Watch ကဲ့သို့ရုပ်ဆိုးသည်။ !!!!
Adriana Si Vasi Sibisan သို့ပြန်သွားပါ
Miguel အိန်ဂျယ် Juncos ဟုသူကပြောသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ့အဘို့လှပပုံရသည်, ဒါပေမယ့်မိန့်အဖြစ်: "အရသာများအတွက် ... အရောင်များ။
Miguel Ángel Juncos အားပြန်ပြောပါ
Joer, သူတို့ကတစ် ဦး အယူအဆလုပ်ကတည်းကပတ်ပတ်လည်အောင်, ကကြောက်မက်ဘွယ်သော applewatch ၏ဒီဇိုင်းကိုတိုးတက်စေရန်လွယ်ကူသောကြည့်ရှု, သူတို့သည်သွားနှင့်တူညီတဲ့လောင်းကစားရုံလုပ် lp ။
ဂုဏ်ယူပါတယ် iPod! စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းက ၁၄ နှစ်
သင်၏ Mac X ကို OS X 10.11.1 သို့မွမ်းမံသောအခါသင်လုပ်သင့်သည်